Ikhaya lePonce yaseTropiki w/ I-Oasis yangaphandle yaBucala! - I-Airbnb
Ikhaya lePonce yaseTropiki w/ I-Oasis yangaphandle yaBucala!
Fumana indawo yakho yokuhlala yabucala kunye nenoxolo xa uhlala kweli gumbi lihle linamagumbi ama-3, igumbi lokuhlambela eli-3.5 lokurenta ikhaya ePonce, ePuerto Rico. Eli khaya lingasese libonelela ngeendawo zokuhlala ezi-6, lenza ukuba lilungele abahlobo okanye izibini ezihamba kunye. Indawo yokuphumla ngakwichibi lakho labucala njengoko ujonge umbono omangalisayo wesixeko esingezantsi!
I-Suite yegumbi lokulala 1: Ibhedi yeNdlovukazi | Igumbi lokulala eli-2 (Igumbi eliMhlophe): Ibhedi yeKumkanikazi | Igumbi lokulala le-3 (i-Redwood): Ibhedi ye-Queen
Eli khaya lizaliswe kukukhanya, livulekileyo likwithambeka eligqunywe yimithi emide nende. Yonwabela impepho epholileyo, iimbono zolwandle lweCaribbean, kunye nohlaza oluhle lwetropiki njengoko uphumla phantsi kobushushu belanga.
Qala iholide yakho ngqo ngokuntywila kwiphuli eblue ecacileyo. Indawo yokuphumla kwidesika okanye ungqengqe kumthunzi opholileyo wegumbi lelanga elinendawo yokuhlala esofeni. Ngodonga lwefestile yeglasi, uya kuyithanda iimbono ezingathintelwanga kwiintaba ezijikelezileyo zasePuerto Rico.
Lungiselela i-poolside snack ekhitshini nazo zonke izixhobo eziyimfuneko kunye nezixhobo eziyimfuneko. Ukutya etafileni ngezihlalo ezi-6 njengoko usabelana ngeenkumbulo zakho ozithandayo kuhambo losuku.
Emva kosuku oluchulumancisayo lokuphonononga iPonce okanye usuku lokuphumla ngasechibini, uya kulala ubuthongo njengoko ubuyela kwelinye lamagumbi okulala ama-3. Iindwendwe ezihlala kwigumbi lokulala ziya kuba nokufikelela kwigumbi lokuhlambela le-en-suite.
4.52 out of 5 stars from 43 reviews
4.52 · Izimvo eziyi-43
Xa ungaphumli kumgangatho welanga okanye uqubha kumanzi apholileyo echibini, hamba ujikeleze iPlaza edolophini ukuze uhlaziye igelato kunye ne-ayisikrimu. Uya kufumana iincasa zasekhaya ezifana ne-passionfruit, i-guayaba, kunye nekhokhonathi evela kwiKing Cream.
Ukufumana iqhekeza lembali yasePuerto Rico, tyelela iMuseo de Arte de Ponce ukuze ubone ingqokelela yabo yobugcisa bale mihla bemizobo ekumgangatho wehlabathi. Uya kuzithanda izakhiwo zesitayile seColonial yaseSpain ezenza le dolophu iyimbali.
Ujikelezwe ngamanzi, thatha inxaxheba ekuqubheni elwandle, ukhenketho ngeenqanawa, kunye ne-kayaking kwiilwandle ezahlukeneyo ezikhoyo kwisiqithi. Umgca weZip phezu kweentaba ezichumileyo okanye ujonge imiqolomba engaphantsi komhlaba yosuku oluzaliswe yimincili kunye nokuzonwabisa. Yonke le misebenzi imalunga ne-1-2 iiyure kude nepropathi!
Uya kufuna ukuqhuba imizuzu engama-50 ukuya kwindawo yokugcina iNdalo yeHlathi elomileyo kunye neToro Negro Rainforest. Zingene kwindawo enzulu efana nehlathi njengoko unxibelelana neentaka ezingaqhelekanga.
Izimvo eziyi-1 340
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Ponce